Ihe ị kwesịrị ịmara banyere ịrụ ọrụ na Dubai | Theresa R. Fianko
Ihe ị kwesịrị ịmara banyere ịrụ ọrụ na Dubai
Dubai ọ bụ ebe dị mma maka ezinụlọ na-eto eto?
Gịnị mere Dubai ji nwee mmasị na South East Asia ọbịa?
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at June 7, 2019
Ụlọ ahịa Dubai-City
Ihe ndị i kwesịrị ịma gbasara ịrụ ọrụ n’ime ya Dubai
Dubai bụ obodo mara mma na nke ama ama maka ọtụtụ ebumnuche dị ka ịbụ azụmahịa, azụmahịa na njem nleta. N'ihe banyere 85% nke nde nde 3 a na-atụ anya ịhapụ mba ọzọ, obodo ọhụụ ahụla ka ndị mmadụ si na mpaghara niile na-akwaga ebe obibi na ọrụ ebe a. Enwere ọtụtụ ihe kpatara nke na-eme ọ bụghị naanị na Dubai na-anabata ndị njem mana ọ bụ ebe udo maka ndị bi.
Edebere ụlọ ọrụ gọọmentị na nkeonwe yana sistemụ iwu na-arụ ọrụ na Dubai, yabụ mpaghara ọbụla ị hụrụ onwe gị kwesịrị ịmara ma ghọta ikike gị tupu ịnara ọrụ a ga-enye gị. Ndị otu ọrụ abụchaghị ihe ewu ewu ebe a, mana UAE iwu ndị ọrụ na-elekọta akụkụ niile nke ọrụ iji hụ na ha na-arụ ọrụ na gburugburu mma, nchekwa na gburugburu mma.
Usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị dabeere na Iwu UAE
Ebe E Si Nweta Instagram: https://www.instagram.com/hhshkmohd/
E nwere ụlọ ọrụ niile na gọọmentị na ndị nwe obodo na - ahụ maka na a na - edozi nsogbu ndị ọrụ na nke ọma n'etiti ndị ọrụ na ndị ọrụ. Ọ bụ ọrụ nke abụọ ahụ iji jide n'aka na a na-agbaso usoro ziri ezi n'ihe gbasara akwụkwọ na uru. Ozugbo emere nke a, iwu na-eme ndokwa maka ndị ọzọ a na-agbarịta ụka n'okwu banyere nsogbu na-eme n'oge ma ọ bụ mgbe ọ gasịrị ọrụ. Na weebụsaịtị www.uaelaborlaw.com, ị ga-ahụ ozi banyere uru na mkpali, oge ọrụ, mgbanwe na ezumike na ikike niile nke ndị ọrụ na ndị ọrụ.
Mgbe ị dị ọhụrụ na Dubai ma ọ bụ na-agbanwe ọrụ, jide n'aka na ịgụ ma mara iwu ọrụ. Ghọta iwu ndị a ma bụrụ akụkụ nke usoro mmejuputa ha tupu, n'oge na mgbe ọrụ gị na nzukọ gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwakwu nkọwa na amaokwu ọ bụla nke nwere ike ọ gaghị edo gị anya, kpọtụrụ onye ọ bụla n'ime ụlọ ọrụ ahụ na onye nnọchianya ga-enyere gị aka.
A kọwara usoro taxation
Dubai na-enye onye ọ bụla na-arụ ọrụ ụgwọ ụgwọ onwe ya maka ụtụ isi. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kpatara ndị dọtara ndị si mba niile na ụwa gaa n'obodo ahụ. Ndị mmadụ na-ahapụ mba ha ka ha rụọ ọrụ iji nweta ndụ ka mma maka onwe ha na ezinụlọ ha. Echiche nke enweghị ịkwụ ụtụ isi ihe karịrị ego onye ọ bụla na-arụ na Dubai. Web bụ nhọrọ, n'ihi ya ị nwere ike kpebie otú ị ga-esi dịrị ndụ na-adabere na ego gị. Otú ọ dị, ị maara nke ọma na ego ọ bụla ị na-enweta na-abịakwute gị n'ụzọ zuru ezu n'enwetaghị ụtụ ọ bụla dịka ụtụ. Maka ndị na-achọ ịzọpụta, ịrụ ọrụ na Dubai ga-enye gị ohere.
Ọ bụrụ na a ga-enwe aha oku maka mba niile si mba ọ bụla dị n'ụwa na Dubai, ị ga-ahụ onye nnọchianya maka onye ọ bụla! Nke a bụ otú ndị ọrụ ọrụ dị iche iche na Dubai na UAE si dị iche n'ozuzu. Maka ndi mmadu choro otutu ihe omuma oru di iche iche na omenala ndi ozo, unu ahọrọ obodo kwesiri. Ọ bụghị ihe na-ahụkarị ịchọta òtù dị iche iche na-arụ ọrụ na-agụnye ndị sitere n'otu mba ọ bụ ezie na nke a ga-ekwe omume.
Ihe kachasị dị mkpa bụ na ị ga-eso kọọrọ ndị ọrụ ibe gị na mpaghara dị iche iche na mpaghara gị ọrụ ọrụ gị. Ihe mara mma nke a bụ eziokwu na ha na-enwe ike ịrụ ọrụ ọnụ dịka otu n'udo iji nweta ihe mgbaru ọsọ na nhazi. Ị ga-amụta banyere ọdịbendị dị iche iche, okpomọkụ, ọdịdị, asụsụ na ụzọ ndụ zuru oke site na ndị dị iche iche si mba dị iche iche. Otutu ndi otu na-ahazi usoro omenala ndi mmadu na-enweta ohere nke ijikota ma gosiputa omenala bara uru site na mba ha.
Ọnụ ọgụgụ ọjọọ nke Dubai
Dubai bụ otu n'ime obodo kachasị nchebe ibi, na ọnụ ọgụgụ mpụ dịtụ ala. Ọrụ nchebe ebe a dị irè iji hụ na ndị bi na ndị njem nleta na-agbaso iwu. N'ụzọ ezi uche dị na ya, ndị mmadụ kwesịrị ịma onwe ha maka nchekwa ha n'agbanyeghị ebe ha nọ n'ụwa ma ọ dị mkpa ịmara na ị bi n'ime obodo ebe a na-elebara nsogbu nchedo anya ma na-eme mgbalị mgbe nile iji meziwanye nchebe.
Enwere ọtụtụ ọrụ na Dubai nke chọrọ ịrụ ọrụ oge mbubreyo ma ọ bụ na-agba ọsọ na ịmara na obodo bụ nchekwa ebe ga-ekwe ka ị na-aga ahịa gị nkịtị na-echegbu onwe gị. Abụ obodo dị nchebe pụtakwara na a ga-enwekwu ntụkwasị obi n'ịzụlite ezinụlọ ebe a. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na akụrụngwa na-eme ka Dubai bụrụ ebe ị ga-ebi, rụọ ọrụ ma binyere ezinụlọ gị. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-atụle ịkwaga ezinụlọ gị na Dubai, ọ nweghị nnukwu ihe kpatara ịgaghị eme ya.
Ebe E Si Nweta: Dubai Police Instagram
Mmechi na Dubai
Dubai bụ isi azụmaahịa na azụmaahịa azụmahịa na Middle East mpaghara, ya mere ọtụtụ ụlọ ọrụ mba dị iche iche bụ ndị hiwere isi ma ọ bụ nwee alaka n'obodo. A na-asụ Arabic na Bekee ebe a. Na-arụ ọrụ na bi na Dubai ga-enye gị mgbakwunye siri ike na mkpughe ịchọrọ ka ịsọ mpi na ebe ọrụ uwa niile. Rụ ọrụ na Dubai ga-eme ka ị zuo ike na ọkachamara na ụkpụrụ omume tọ na-eme ka ọrụ gị gaa n'ọzọ ọzọ. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị mmadụ eji Dubai mee ihe iji mee ka ha gaa mba ndị ọzọ ha họọrọ, ebe ọ bụ na ndị na-ebi ndụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'ebe a dị mfe. N'ịbụ ndị na-agbasa ụwa, ọ dị mfe ịrụ ọrụ n'ebe ọ bụla n'ụwa.
Ala nke nwere ohere ebighebi, Dubai ka bụ ebe iji wuo ọrụ nlekọta nrọ. Enwere ọtụtụ ohere ọrụ na oru ngo na-aga n'ihu, njem, ile ọbịa, teknụzụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Na Expo2020 naanị gburugburu, ohere dị ukwuu maka ọdịda ọrụ nrọ gị na Dubai. UAE n'ozuzu ya bụ mba dị nnọọ mma nke na-agba ume iche iche ebe ị nwere ike ịchọta ndị si n'okpukpe niile ebe a, inwe ebe ofufe.
Maka ndị chọrọ ịzụ ahịa azụmaahịa, a hapụghị gị. Ime azụmahịa na Dubai Emeela ka usoro dị mfe site na gọọmentị dị iche iche iji gbaa ndị otu na ndị otu aka itinye aka na ọrụ ịchụ nta ego. Nke a pụtara ìhè na ọnụọgụ ndị na-etinye ego na-azụ ahịa na Dubai yana ụlọ ọrụ azụmahịa obodo na nke ụlọ na-agbasa ma na-acha. Akụrụngwa bụ ihe kachasị ama, yana dịka nnukwu ọdụ ụgbọ elu, Obodo a dị n'ụzọ dị mfe iji mee ka ọ dịrị njem mfe ụwa. Ndụ dị mma, ọ na-adịkwa mfe ịchọta ebe ntụrụndụ.
Site na: Theresa R. Fianko
(Marketing Communications, Onye edemede, Onye Okike Owuwu)
Ụlọ ọrụ Dubai City ugbu a na-enye ezi nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka nke anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Yabụ, site na nke a, ị nwere ike nweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates ya na asusu gi.